मुना ह’त्याका’ण्डः वकिलले गरे जन्मकै’द हुने खुलाशा, अरु क–के भने ? हेर्नुहोस् भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मुना ह’त्याका’ण्डः वकिलले गरे जन्मकै’द हुने खुलाशा, अरु क–के भने ? हेर्नुहोस् भिडियो
admin February 17, 2020 भिडियो, समाज	0
गत सोमबार (माघ २७ गते) पूर्वसचिव कार्कीको सानेपास्थित निवासमा पत्नी मुना ग’म्भीर घा’इते अवस्थामा फे’ला परेकी थिइन्। ललितपुरको सानेपामा घ’टेको यो घ’टना अझैसम्म पनि रहस्यमय नै रहेको छ । यस घ’टनालाई लिएर धेरैको मनमा शंका उपशंका उब्जिएको र सबैको कौतोहलताको बिषय बनेको छ । यही बिषयमा आएको अपडेट अनुसार पूर्वसचिव कार्कीले ड्राईभरलाई गाडी चलाउन नदिएर आफैले गाडी चलाएर लानु भयो ।
यसरी आफैले गाडी चलाएर लैजानुमा पनि आफैँमा संकास्पद भएको र शंकाको घेरो पूर्वसचिव कार्कीमाथि नै खनिएको छ। यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले पनि आफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका छन् । यथार्थ नबुझेका केही व्यक्तिले घटनाको बारेमा अनुमानको भरमा बोलिरहेका र कुनै पनि अवस्थामा छिट्टै वास्तविकता उजागर हुनेमा आफु बिस्वस्त रहेको बताएका छन् । घ’टना अझै पनि अन्योलमा रहेको बेला पूर्ण अनुसन्धान बिना केही भन्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
कुनै प्रमाण बिना कसैको चरित्रमाथि औंला उठाउनु गलत हो भन्दै अधिवक्ता कार्कीले अनुसन्धानबाट दो’षी ठहरिएमा घ’टनामा संलग्न जो भएपनि स’जायको भागिदार हुनुपर्ने वताएका छन्। अस्ति शुक्रबार प्राप्त सिसिटिभी फुटेज र हिजो सार्वजनिक भएको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टका अनुसार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको डोरीले घाँटी क’सेर ह’त्या गरेको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टबाट खुलेको छ।
अधिवक्ता कार्कीसँग सानेपामा घटेकाे पूर्वसचिवकि श्रीमति मुना कार्कीकाे ह’त्या काण्डमा भएकाे यथार्थ बारे गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा छ ।
अन्ततः कुमार–अनुपा प्रहरीबाट छुटे, कुमार र चुनीमाया मिलेपछि अनुपा भइन् घर न घाटको (भिडियो हेर्नुस्)
थु’क्क मेरो जात ! जोवन चल्ने, पानी छाेएकाे नचल्ने ….(भिडियो अवस्य हेर्नुहोस)